एमाले र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नेताहरुबीच कार्यक्रममै चर्काचर्की (भिडिओसहित) « रिपोर्टर्स नेपाल
एमाले र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नेताहरुबीच कार्यक्रममै चर्काचर्की (भिडिओसहित)
काठमाडौं, १८ असोज । नेकपा (एमाले) का नेता विनोद ढकालले विधान महाधिवेशन भव्यताका साथ सम्पन्न भएको र आफूहरुले लिएको उद्देश्य पूरा भएको दाबी गरेका छन् । उनले विधान महाधिवेशन प्रभावकारी बनाईएको सुनाए । उक्त महाधिवेशनमा ६ हजार तीन सय प्रतिनिधिहरु सहभागी भएको पनि सुनाए ।
उनले पार्टीको आगामी महाधिवेशनअघि नै राजनीतिक प्रतिवेदन पास गरिसकिएको सुनाए । उनले आफ्नो पार्टीले जनताको बहुदलीय जनवादलाई मार्कदर्शक सिद्धान्तको रुपमा अघि बढाएको पनि सुनाए । उनले अब पार्टी समाजवादी कार्यक्रमका साथ अघि बढ्ने पनि सुनाए । हिजो राति प्राइम टिभीबाट प्रसारण भएको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
उता, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीका प्रभावशाली नेता मेटमणि चौधरीले एमालेको विधान महाधिवेशन नियमित प्रक्रिया भएको सुनाए । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचनपछि एमालेलाई पहिलो नम्बरको पार्टी बनाउँछु भन्नु पनि हाँस्यास्पद भएको सुनाए । उनले ओलीले जनतामा गएर फेरि मत माग्ने अधिकार नै नभएको सुनाए । उनले ओली के मुख लिएर निर्वाचन जान्छन् ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले केपी ओली कसरी शक्तिशाली भए ? भन्दै प्रश्न गरे ।
काठमाडौं, २८ असोज । नागरिक समाजका अगुवा तथा बरिष्ठ चिकित्सक डा. सुन्दरमणि दिक्षितले आफू हिन्दूराष्टको
काठमाडौं, २८ असोज । राजनीतिक विश्लेषक डा. सुरेन्द्र केसीले दसैंको महत्व र क्रेजअहिलेपनि यथावत रहेको
काठमाडौं, २७ असोज । नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आफूहरुको भारत भ्रमण उपलब्धिमूलक रहेको
चीनसँगको नाका तत्काल खोल्न अध्यक्ष कटुवालको आग्रह, नत्र आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी (भिडिओसहित)
काठमाडौं, २६ असोज । राष्टिय व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष नरेश कटुवालले तत्काल चीनसँगको नाका सुचारु नभए
काठमाडौं, २६ असोज । नवनियुक्त शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले सरकारले विपन्न वर्गको लागि केही गर्ने भनेर